एसिया कप छनोटः सिंगापुरको इनिङ धरापमा, आठौं विकेट गुम्यो ! [अपडेट] - Everest Dainik - News from Nepal
एसिया कप छनोटः सिंगापुरको इनिङ धरापमा, आठौं विकेट गुम्यो ! [अपडेट]
काठमाडौं, भदौ १७ । एसिया कप छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गत अहिले नेपालले आफ्नो चौंथो खेलमा सिंगापुरसँग खेलि रहेको छ । टस हारेर फिल्डीङको मौका पाएको सिंगापुरको आठौं विकेट पतन भएको छ ।
सिंगापुरको आठौ विकेट सन्दिप लामिछानेले लिएका छन् । सन्दिपको नाममा आज यो दोस्रो विकेट हो । यसअघि ललितनाराण राजवंशीले ३, पारस र सोमपालले समान १ १ विकेट लिइ सकेका छन् ।
३५ ओभरको खेल सकिदा सिंगापुरले आठौं विकेट गुमाउँदै १३७ रन बनाएर खेलि रहेको छ । यहि सेप्टेम्बर १५ तारिकबाट संयुक्त अरब एमिरेट्स (युएई) मा सञ्चालन हुने एसिया कपको छनौटका लागि नेपाल सहित अन्य ६ टोलीले छनौट प्रतियोगितामा भाग लिंदै छन्।
याे पनि पढ्नुस सीपीएलमा पहिलो पटक सन्दिप ब्याटिङ गर्दै [LIVE]